अस्तव्यस्त बन्यो कृषि क्षेत्र, के भन्छन् किसानका नेता? 'बैंकबाट ऋण लिएर वस्तु उत्पादन गर्ने किसानका लागि आपतकालीन कोषबाट तत्काल निश्चित राहत दिनुपर्छ।' | Seto Patrika
अस्तव्यस्त बन्यो कृषि क्षेत्र, के भन्छन् किसानका नेता? ‘बैंकबाट ऋण लिएर वस्तु उत्पादन गर्ने किसानका लागि आपतकालीन कोषबाट तत्काल निश्चित राहत दिनुपर्छ।’
काठमाडौँ — सामान्य अवस्था हुन्थ्यो भने यतिबेला उखु बिक्रीका लागि किसान जुटिइरहेका हुन्थे। तर, करिब एक महिना लामो लकडाउनका कारण उखुका लाँक्रा (बोट) सुक्न थालेका छन्। कतिपय किसानले समयमै उखु बिक्री गर्न नसक्दा बगानमै आगो लगाएको समाचारसमेत आएका छन्।
–चिया किसानको समस्या पनि कम पीडादायी छैन। चियाको ‘फस्ट फ्लस’ (सिजनको पहिलो टिपाइ) टिप्न नपाएपछि झापाका किसानले त चियाबारी नै फाँडेका छन्।
–मकैमा फौजी किराको प्रकोप नयाँ होइन। तर लकडाउनका कारण किटनाशक औषधि खरिद गर्न नपाउँदा किसानमा चिन्ता छाएको छ।
–लकडाउनकै कारण कुखुरापालक किसान पनि मारमा छन्। कुखुरा र अन्डा बिक्रीमा समस्या हुँदा पोल्ट्री व्यवसाय नै धरासायी बन्ने अवस्थामा पुगेको किसानहरुको गुनासो छ। घरखेत धितो राखी ऋण निकालेर कुखुरापालन व्यवसायमा लागेका उनीहरुमा लकडाउन लम्बिँदै जाँदा चिन्ता पनि थपिएको छ।
–कर्णालीमा किसानहरुको समस्या झनै जटिल छ। खाद्यान्न ढुवानीको जिम्मा लिएको सप्लायर्सले ढुवानी नगर्दा जाजरकोटमा खाद्य अभाव भएको छ। नयाँ बाली गहुँ पाकेको छैन। पुरानो बाली सकिएपछि सर्वसाधारण समस्यामा परेका छन्। आफ्नै उत्पादनले ६ महिनासम्म खाना नपुग्ने यहाँका किसान अहिले समस्यमा परेका छन्।
माथिका घटनाले नै भन्छ- बजारीकरणको समस्याका कारण किसानले कति सास्ती खेपिरहेका छन्!
बर्खेबाली लगाउने बेला व्यस्त हुने किसान घरमै हात बाँधेर बसेका छन्। यसको असर अर्को वर्षको उत्पादनमा पर्छ। जसका लागि बाँकी हिसाब गर्नै पर्दैन।
समस्यामा परेका किसानका लागि भन्दै संघीय र प्रदेश सरकारबाट केही निर्णय पनि भएका छन् तर त्यसले किसानलाई तत्कालै छुन सकेको छैन। निर्णयअनुसार प्रदेश सरकारको २० प्रतिशत बजेट कृषिमा लगानी हुनेछ। कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री घनश्याम भुसाल र सातै प्रदेशका कृषि, भूमि तथा सहकारी मन्त्रीबीच भएको छलफलमा केही समयअघि यस्तो निर्णय भएको थियो।
Prevदीर्घरोगी र गम्भीर प्रकृतिका बिरामीहरूलाई नियमित सेवा प्रवाह गर्न अस्पतालहरूसँग अनुरोध
nextडीभी रोकिन सक्ने:राष्ट्रपति ट्रम्प